Ku guuleysto dacwad ka dhan ah Apple shaashadda jabtay ee Apple Watch | Wararka IPhone
Ku guuleysto dacwad ka dhan ah Apple shaashadda jaban ee Apple Watch-kaaga
Waa kiiskii Daa'uud ee ka dhanka ahaa Goliath, laakiin adduunka casriga ah. Nin ayaa ku guuleystay inuu guuleysto dacwad ka dhan ah Apple gudaha Boqortooyada Midowday, ka dib markii shaashaddaada Apple Watch waxyeello soo gaadhay waxyar ka dib iibsiga. Dacwadiisa, British Gareth Cross, oo degan Aberystwyth, wuxuu sheegayaa sida toban maalmood ka dib markii uu iibsaday Apple Watch sanadkii hore uu awooday inuu kala saaro shaashadiisa ayaa jabtay. Saacadda lama ridin oo dusheeda si kadis ah looma garaacin.
Markuu Cross aaday dukaanka Apple ee kuugu dhow si muraayaddiisa loo beddelo, wuu la yaabay inuu ogaado taas damaanad qaadka ma dabooli doono waxyeelada noocan ah, sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu Apple ku dacweeyo sharciga Ingiriiska ee ilaalinta macaamiisha. Cross wuxuu u maleynayay inuu haysto fursad uu ku guuleysto dagaalkan maxkamadeed ee ka dhanka ah guutada Apple ee qareenada wuuna ku guuleystay, inkasta oo uu qirtay in bilihii ugu dambeeyay ee maxkamaddu ay ahaayeen "xoogaa walaac ah, oo ay tahay inaan dhowr jeer ka sheego arrintaas".
Nidaamka garsoorka wuxuu socday lix bilood, laakiin ugu dambeyn garsooraha ayaa xukmiyay Gareth Cross, kaasoo ku dhawaaqaya inuu taageere u yahay shirkadda Apple. Shirkadda Californian ayaa lagu amray inay bixiso 429 rodol si ay u daboosho qiimaha saacadda sidoo kalena ay u xambaari doonto dhammaan kharashaadka sharci ee shirkadda Cross.
Qaadiga ayaa xaqiijiyay in “Apple ay jabisay qandaraaskii ay kula jirtay macmiilkeeda isaga oo u diiday inuu badalo saacada, goorta loo suuq geeyo sidii xoqida oo kale«.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Ku guuleysto dacwad ka dhan ah Apple shaashadda jaban ee Apple Watch-kaaga
Sabirka quduuska ah ee ilaahyada ...
Miina waxay ahayd danab ku saleysan wanaag 15-kii maalmood ee hore
Ma dhicin, wax ku dhacay ama wax la yaab leh
Waxaan aaday barxada ciisaha waxaanan aaday jidkii aan ku imid
Maaddaama ay ahayd saacadda cusub, xitaa ma aanan ogeyn waxa ay ku kacday in lagu beddelo crystal safayr
Kadib markii uu wacay 500 jeer si uusan waxba u fadhiyin. (Wuxuu had iyo jeer sheegtaa in safayr safayr la xoqay oo ay sabab u tahay si qaldan)
Aakhirkii waxaan awooday inaan la hadlo qof ka sareeya iyo inuu si shakhsi ah u raaci doono kiiskayga
Iyo inay u diri doonaan saacadda si loo falanqeeyo si loo arko haddii ay noqon karto cilad soo saar
Ka dib markaan helin wax war ah, waan qaatay, waxaan aaday xeebta balliga, waxaan quusiyey habeenkii, ilaa aakhirkii ay dhimatay, waxaan aaday baarka Venius markii aan arkay inaysan soo nooleyn, waxay direen si ay u hagaajiso oo 3 maalmood ka dib mid kale ayay ii soo direen.
Tani cusub ma aha hal xoqan oo aan dhib lahayn 6 bilood.
Waxaan u maleynayaa in midka kale uu cillad lahaa, muxuu isagu iskaga xoqaayay isaga oo aan eegin isaga maalin kasta nabarro badan ayaa soo baxa
Sawirada aan u diro Apple oo aan wali haysto ayaa cadeeyay
Aniga ahaan waxay tahay in saacadani iila muuqato khiyaanada ugu weyn ee Apple, u fiirso inaan haysto waxsoosaarka tufaaxa, laakiin kani wuxuu iila muuqdaa shit buuxa, waxaad arki doontaa sida 2-da ay kun jeer ugu celin doonaan tan faa iidooyinka.
Ma aqaano in la xoqay iyo in kale, laakiin tayda sii deysa bisha Janaayo waxay la mid tahay dameerka. Lafteeda wax yar bay samaynaysaa oo haddii ay qaldamaan, anigu xitaa ku sheegi maayo. 100% saxaro tufaax ah, looma xuso kooxda isboortiga fluoroelastomer midabkeedu yahay dhagax weyn oo ah A BIG MY… LIKE A GOUSE. Anigu si dhib yar ayaan u isticmaalay waxayna durba muujineysaa calaamadaha duugga, wanaaggeyga saacadda oo igu kacday € 469 waxay umuuqataa dhac hubaysan. Waxaan ku siinayaa talo aad u wanaagsan. WELIGEY HA IIBSAN WIXAN BADAN MY. Toddobaad ka dib markii aad haysatid, ma garanaysid haddii ay ka wanaagsan tahay in aad ku dhaafto miiska sariirta oo amraya ama haddii aad dhigeyso ebay si aad uga baxdo. Sababtoo ah haa marwooyin, 18 saacadood waxba ma jiraan, haddii ay ku soo wacayaan dhowr jeer oo haddii aad wax yar is aamustayna, batteriga macsalaameeya. Waxaad haysataa waqti dheeri ah oo ka badan isticmaalka. Waxaas oo dhan waxaan ku darnaa marka ay rabto, waxay fureysaa codsiyada markii aad u baahatana ugu badnaan ma fureyso, iska demi oo aan tagno. Tani waa waayo-aragnimadayda saacadda tufaaxa barakaysan, maadaama aad arki karto wax aad u qanacsan. Marka qof kasta oo ka fikira waxa uu doonayo, waxa aan rabaa waa inuu aado dukaanka tufaaxa ugu horeeya ee aan qabto oo aan ku tuuro madaxa qaar ka mid ah JINSIGA sanka. Xitaa xitaa iPhone 3g ma aheyn mid aad u xun. U fiirso in maalintiisii ​​ay iyaduna ahayd wax gebi ahaanba cusub oo ay adag tahay in codsiyo la helo, laakiin maalmihii aan joognay iyo safarka ay dadkan ku leeyihiin soo saarista taleefannada casriga ah, lama aqbali karo inay qashin noocan oo kale ah sameeyeen.
Pangu wuxuu kugula talinayaa cusbooneysiinta iOS 9.2.1. JAILBILAND aragga?
Adobe wuxuu bilaabayaa casharro lagu baranayo sida loo isticmaalo Photoshop Sketch-ka iPad Pro